Published by Book News on March 2, 2019 March 2, 2019
Tontosa soa aman-tsara ny herinandron’ny angovo notanterahina teny amin’ny Hotel Panorama ny 18 Febroary ka hatramin’ny 23 Febroary 2019 teo.
Vahaolana maharitra ho an’ny famokarana herinaratra
Mpisehatra maro eo amin’ny sehatra ny angovo no nandray anjara nijery ny vahaolana momban’ny herinaratra eto amintsika nandritra ny herinandron’ny angovo notanterahina teny amin’ny Hotel Panorama ny 18 Febroary ka hatramin’ny 23 Febroary 2019 teo. Niompana bebe kokoa tamin’ny vahaolana ho an’ny Jirama ny dinika tamin’izany.
Misedra olana eo amin’ny fitantanana sy ny lafiny ara-bola ny orinasa mpamokatra Jirama amin’izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fatapatapahan’ny jiro (délestage) matetika tato ato, indrindra amin’ireo tanan-dehibe miisa 60 eto Madagasikara ka tafiditra ao anatin’izany i Antananarivo.
Nojerena nandritra ny hetsika araka izany ireo vahaolana maharitra hoan’ny herinaratra toa ny fampitomboana ho 50% n’ny Malagasy manjifa herinaratra amin’ny vidiny mirary.
Notanterahina teny amin’ny Hotel Panorama ny herinandron’ny angovo. cc: Toria Dimbiniaina
Eo ihany koa ny fampitomboana avo roa heny ny fahafahana mamokatra herinaratra ao anatin’ny 5 taona, izany hoe mihoatra ny 800MW amin’ny taona 2023.
Miisa dimy ireo asa ho atao hanatanterahana ireo tanjona toa ny fanafoanana ny “delestazy” sy ny fifehezana ny jiro. Hampitomboana ny famokarana herinaratra. Hojerena ny fiantraikan’ny fampiroboroboana ny herinaratra eo amin’ny tontolo iainana. Hamolavola sy hanatanteraka ny drafitra nasionaly momban’ny angovo ihany koa ny Fanjakana.